Ciyaaryahanka Barcelona Gerard Pique Oo Dhaawac Gumaarka Ah Soo Gaaray
HomeWararka CiyaarahaCiyaaryahanka Barcelona Gerard Pique oo dhaawac gumaarka ah soo gaaray
April 8, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain 0
Gerard Pique ayaa dhaawac gumaarka ah kasoo gaaray kulankii Barcelona ay barbaro 1-1 ah la gashay Eintracht Frankfurt lugtii hore ee sideed dhamaadka Europa League habeenkii Khamiista.
35-sano jirkaan ayaa dhibka muruqa ah soo gaaray ka dib markii ay u siibatay markii daafaca dhexe uu ogaaday inuusan awoodin inuu sii wato, waxaa lagu bedelay Clement Lenglet daqiiqadii 22aad.
Inkastoo Pique uu ku jiro sanadihii ugu dambeeyay ee xirfadiisa ciyaareed, xiddiga heerka caalami ee dalka Spain ayaa weli loo arkaa ciyaaryahan muhiim u ah kooxda Xavi , waxaana uu ciyaaray inta badan kulamadii Barcelona ee tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, isagoo ciyaaray 38 kulan iyo afar kaliya ayaa ka maqan dhaawac.
Daafaca ruug cadaaga ah, si kastaba ha ahaatee, waxa uu haatan qarka u saaran yahay inuu garoomada ka maqnaado, iyadoo kooxda reer Catalan ay ku xaqiijisay website-keeda rasmiga ah “in baaritaano dheeri ah loo baahan doono” si loo ogaado heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaciisa.
Pique ayay u badan tahay in aanu u ciyaarin Barcelona kulanka ay Axada la ciyaari doonto kooxda Levante ee horyaalka La Liga waxana uu sidoo kale shaki weyn ku jiraa kulanka lugta labaad ee Europa League ee ay Frankfurt kula ciyaari doonaan Camp Nou khamiista soo socota.